Godina Koonsootti ji’a Tokkotti qofa namootni 26 hidhatootaan lubbuu isaanii darbeera jedhame | Addis Maleda
መነሻ ገጽAfaan OromooOduu AbooliiGodina Koonsootti ji’a Tokkotti qofa namootni 26 hidhatootaan lubbuu isaanii darbeera jedhame
Naannoo saboota,Sablammootaa fi uummattoota kibbaa godina Koonsoo fi naannawa ollaatti ji’a tokkotti qofa namootni 26 ol hidhatootaan Eenyummaan isaanii hin beekamnee ajjeeffamuu qondaalli naannawa sanaa maqaan isaanii akka eeramne barbaadan tokko Addis Maaledaatti himaniiru.
Naannoo saboota,Sablammootaa fi uummattoota kibbaa godina Koonsootti Ebla 7 bara 2014 irraa jalqabee hanga Addis Maaledaan gabaasa kana qindeessetti godina Koonsoo Aanaa Sagan Zuuriyaa fi bakkeewwan garagaraatti haleellaan yeroo yerootti humnoota Eenyummaan isaanii hin beekamneen raawwataman akka hin dhaabbanne qondaalli kun eeraniiru.
Ji’a tokko darbe qofaatti humnoota hidhataniin namootni 26 ol ajjeeffamuu fi 100 ol irra ammoo miidhaan salphaa fi cimaa gahuu,yeroo yerootti ammoo naannawaa jiraatanii namootni ukkaafamanii fudhatamanii akka jiran Addis Maaledaan madda odeeffannoo irraa dhagaheera.
Godina Koonsoo Aanaa Sagan Zuuriyaa,Aanaa addaa Burjii,Aanaa addaa Aalee,Aanaa addaa Daraashee fi Aanaa addaa Ammaarrootti walitti bu’insoota uumamaniin manneenii fi qabeenyi qonnaa bultoota Aanaalee fi gandoota adda addaa keessaa jiraatanii gubata jira.
Akkasumas lakkoofsi Kutaalee Hawaasaa naannawa godina Koonsoo jiraatanis lubbuu isaanii oolfachuuf qabeenyaa isaanii dhiisuun qe’ee isaanii irraa buqqa’anii olaanaa akka ta’edha kan himan.
Godina Koonsoo Aanaa Sagan Zuuriyaa fi Aanaa addaa Aalee irra gara magaalaa Arbaamincii fi Aanaalee birootti kan geessu tajaajilli geejibaa erga addaan citee ji’a tokkoo ol akka ta’ee fi hawaasni bakka bakkatti socho’uuf akka rakkates ibsameera.
Naannoo saboota,Sablammootaa fi Uummattoota Kibbaatti humni addaa,poolisiin federaalaa fi Raayyaan ittisaa godinichaa fi Aanaalee adda addaatti ramadamanii rakkoo nageenyaa kana tasgabeessuuf kan bobbaafaman ta’us,naannawa qaamolee nageenya kun jiranittis haleellaawwan raawwataman akka hin dhaabbanne eerameera.
Ebla 18 bara 2014 booda hanga Addis Maaledaan gabaasa kan qindeessetti gidduu gala Aanaa Sagan Zuuriyaa magaalaa Saganitti dubartootni torbaa fi dhiirri 10 walumaan galatti lammiileen nagaan 17 garee hidhate kanaan ukkaafamanii gara naannawa biraatti akka fudhatan Jiraattotni dubbataniiru.
Lammiilee kanneen gadhisisuuf qaamnni mootummaa yaalii godhe akka hin jirre kan kaasan Jiraattotni kunneen poolisiin federaalaa fi humnoonni addaa,magaalaa Sagan jiran wayita lammiileen kunneen ukkaafamanii fudhataman ajaja hin fudhanne jechuun kaampii keessaa osoo jiranii lammiilee kana gadhisisuuf yaalii hin goones jedhameera.
Mootummaa naannoo kibbaas ta’e Mootummaan federaalaa naannawa garee humnoota hidhatanii naannawichaa keessa socha’a irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu dhabuu isaaniitiin garichi yeroo gara yerootti humna isaa cimsaa jiraachuu qondaalichi eeraniiru.
Qindeessaan garee sabqunnantii kominikeeshinii mootummaa Aanaa addaa Ammarroo Amaaree Akiliiluu akka jedhanitti Aanaa addaa kanaa fi naannawa ollaatti Ebla 17 bara 2014 irraa eegalee yeroo yerootti humnoota hidhatan kanaan haleellaan raawwatamu hanga Addis Maaledaan gabaasa kana qindeessetti akka hin dhaabbanne himaniiru.
Torbee darbe naannoo Oromiyaa godina Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa keessa hidhattootni socho’an gara gandoota Ammaarroo adda addaatti seenuun haleellaa raawwachuu isaanii obbo Amaareen ibsaniiru.
Itti dabaluunis Caamsaa 10 bara 2014 haleellaa humnootni hidhatan kun raawwataniin ganda Tifaateetti daa’imman lama ajjeeffamuu fi dabalataan re’oota 40 ol dabalatee beeyladoonni biiroon saamamaniiru jedhaniiru.
Caamsaa 2 bara 2014 Ganda Darbaa irraa namni tokko akkasumas caamsaa 7 bara 2014 Ganda Shaarootti dargaggoon tokko hidhattoota kanaan ajjeefamuu isaanii kan eeran obbo Amaareen erga Baatiin Caamsaa Kun galee qofa walii galaan namootni 4 ajjeefamuu isaanii himaniiru.
Daayrektarri wajjira kominikeeshinii mootummaa Aanaa addaa Daraashee Tamaarii Tasfaayee gama isaaniitiin aanaa addaa Daraasheetti rakkoolee nageenyaa yeroo yerootti mudatan hambisuuf humna addaa Naannichaa,poolisii federaalaa fi Raayyaan ittisaa ramadamanii socho’aa kan jiran ta’us,gandoota adda addatti yeroo yerootti haleellaawwan raawwataman akka hin dhaabbanne ibsaniiru.
Aanichatti hanga ammaatti lammiileen Kuma 25 ol kan buqqa’an yoo ta’u,lakkoofsa namoota du’anii,kan miidhaan salphaa fi cimaan irra gahee hojiin adda baasuu hojjetamaa jiraa jedhaniiru.
Hogganaa qajeelcha kominikeeshinii mootummaa godina Koonsoo kan ta’an Saraawwit Dibaabaa Addis Maaledaan irra deddeebiin bilbila bilbiluufis deebii hin arganne.
Dabalataanis hogganaa bulchiinsa fi nageenyaa godina Koonsoo Garasuu Kattaaleef gaaffii dhiheesseefi gaafficha erga dhaggeeffatanii booda deebii osoo hin kenniin bilbila isaanii cufaniiru.
Previous articleWaldaaleen hojii gamtaa Naannichaa daldaltoota simintoo chirichaaroo bakka bu’uun hojjechuufi
Next articleሺሕዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ የሆኑበት ደቡብ ወሎ ዞን
Weerarri raammoo geerii lafa qonnaa fi dheedichaa heektaara Kuma 100 fi Kuma 11 irratti mudachuu ibsame
Haala itti piroojektiin Taaworii Boca mosoobii qabu raawwatamu ji’a lama keessatti ifa ta’a jedhame
Walii galtee humna ibsaa Keeniyaatti gurguruuf taasifamu yoom akka xumura hin beekamu jedhame.